Wordle, ciyaarta online ee xaaqaysa Twitter | Bezzia
Wordle, ciyaarta internetka ee xaaqaysa Twitter
Dhawr toddobaad way adkeyd in la galo Twitter oo aan kuwan la arag afar geesoodka cawl, huruud iyo cagaar taas oo lagu garto Wordle. Oo waa in ciyaarta ereyga ee lagu heli karo Isbaanishka iyo luqadaha kale labadaba ay noqotay ciyaarta internetka ee moodada ah. Miyaadan weli garanayn isaga?
Wordle waa fikrad iyo abuurkii asalka ahaa ee Josh Wardle, oo magaceedu ka soo jeedo magaca ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, ciyaartu waxay u muuqataa in uu dhiirigelinayo Lingo, tartan telefishan Maraykan ah oo yimid Spain horaantii 90-meeyadii, oo uu soo bandhigay Ramóncín. Ma xasuusto, laakiin waxaa laga yaabaa in qaarkiin ay garanayaan waxaan ka hadlayno.
1 Waa maxay wordl?
2 Sida loo ciyaaro
3 Xagee ka ciyaari karaa?
Waa maxay wordl?
Wordle waa ciyaar online ah oo ujeeddadeedu ay tahay qiyaas shan xaraf. Si tan loo sameeyo, ciyaartu waxay ku siinaysaa 6 isku day oo gaar ah, ka dib markaa waxay ku siin doontaa aragtiyo qaar. Taasi waa sida fudud ciyaarta moodada. Ciyaar aan waqti badan kaa lumin doonin haddii aad ku dhegto, taas oo aad sameyn doonto, sababtoo ah waa inaad sugtaa 24 saacadood si aad u ciyaarto ciyaar cusub. Haddii aanad khiyaanayn, hubso.
Waa a ciyaar bilaash ah kaas oo qof kasta oo leh erayo yar uu ciyaari karo isaga oo aan ku rakibin wax app ah nidaamkaaga si uu sidaas u sameeyo. Kuwaasina malaha waa furayaasha guusheeda iyo waxtarkeeda. Intaa waxaa dheer, ciyaar kasta ka dib, guul ama guuldarro, Wordle waxay siisaa ciyaartoyga suurtogalnimada inuu nuqul ka sameeyo natiijooyinkooda oo uu la wadaago meel kasta oo ay rabaan, taas oo dhiirigelisa tartanka asxaabta.
Ciyaar kasta oo Wordle ah waxa u taagan leydi oo ka samaysan afar geesood oo cad, gaar ahaan lix saf iyo shan tiir oo afar gees ah. Lixda saf ayaa ka dhigan isku dayga aad ku doonayso inaad ku guulaysato ciyaarta, halka 5-geesood ay u dhigmaan shanta xaraf ee ereyga si aad u qiyaasto.
Si aad u ciyaarto waa inaad kelmad si siman u qor oo shan xaraf ah. Kelmadee? Asal ahaan wax kasta oo aad rabto. Ka dib waxaad ogaan doontaa in qaar laga yaabo inay ka faa'iido badan yihiin kuwa kale. Marka la qorayo, labajibaarayaasha ku jira xaraf kasta waxay u muuqan karaan midab cagaar, jaalle ama cawl. Iyo maxay midabadaas macnaheedu noqon doonaan?
Green: Xarafka waa qayb ka mid ah ereyga wuxuuna ku yaal booska saxda ah. Wacan!
Yellow: Xarafka waa qayb ka mid ah ereyga, laakiin ma aha meel sax ah. Waa inaad ku dhaqaaqdaa!
cawl: Xarafka kuma jiro ereyga. Iska ilow iyada!
Midabada, sidaas darteed, waxay ku siin doonaan tilmaamo ku saabsan sida wanaagsan ama sida xun ee aad u socoto. Iyada oo ku saleysan kuwan, waxaad qori kartaa kelmad labaad oo ku siin doonta natiijooyin cusub. Markaa ilaa tiirarka oo dhami ay daalaan ama xalka la helayo. Miyaanad helin? Laguma dayn doono adigoon ereyga garanayn; Barnaamijku wuxuu kuu sheegi doonaa waxa uu yahay ka dibna ku siin doona suurtogalnimada inaad la wadaagto natiijooyinkaaga.
Way badan yihiin casharrada online iyo shortcuts si aad u hesho fursad sare oo aad ku guulaysato ciyaarta. Taladeenu waa in la iska indhatiro. Waa ciyaar waxaana aaminsanahay inay aad u xiiso badan tahay isla markaana aan ku raaxaysanayno ciyaartan anagoo aqoonsanay tabaha na caawin kara. Waxba ma ciyaarno!
Xagee ka ciyaari karaa?
cunt kaliya ku qor google "Ereyga Isbaanishka" ayaa ku siin doona doorashooyin badan oo aad ku ciyaarto ciyaartan. Waxaan kugula talineynaa inaad mid raadiso oo aad naftaada ku koobto inaad ciyaareyso 24-kii saacba mar, si aysan ciyaartu u noqonin "khatar" hawlahaaga.
Sidoo kale, haddii aad si fiican u taqaano ama aad u baranayso luqad kale, maxaad isku dayi weyday inaad midkan ku ciyaarto? Waxay noqon kartaa fursad cajiib ah erayada shaqada, ma u malaynaysaa? Marka loo eego heerkaaga, ma fududaan doonto inaad saxdo, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad barato erayo cusub.
Nooca bilowga ah ee ciyaartan Isbaanishka waxa la sameeyay oo la daabacay horraantii Jannaayo oo ku faafay shabakadaha sida dabka duurjoogta ah. Wax yar ka dib, kuwaas, gaar ahaan Twitter-ka, waxaa ku soo duulay fagaarayaal cawl, jaalle iyo cagaar ah oo kuwa kale wax ka weydiiyeen. Eray dhaqameed ayaa la keenay twitter.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Wordle, ciyaarta internetka ee xaaqaysa Twitter
Faa'iidooyinka isticmaalka kareemka gacanta
Indhaha daalan ku qari talooyinkan